Cudurrada aan faafin oo dhimashada ugu badan sababa - BBC News Somali
Cudurrada aan faafin oo dhimashada ugu badan sababa
Image caption Meydad Sawir hore
Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa waxa ay madaxda caalamka ugu baaqday inay horkacaan ololaha lagu doonayo in looga hortago waxa ay hay'addu ku tilmaantay cudurrada aan faafaafin ee dilaaga ah.
Warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda WHO ayaa lagu ogaaday in cudurrada aan la kala qaadin sida kansarka, cudurrada ku dhaca wadnaha, kaadi macaanka iyo cudurrada ku dhaca dhimirka ay sanadkiiba galaaftaan nolosha 41 milyan oo qof, tiradaas oo noqonaysa boqolkiiba 71 dhimashada caalamka oo dhan.
Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa dooneyso inay kala kaashato la tacaalida xanuunadan guud ahaan xukuumadaha, madaxweynayaasha iyo raisal wasaarayaasha maadaama Wasiirada Caafimaadka dunida oo keliya aysan wax ka qaban waayeen cudurradaan.
Ka hortaga cudurrada wadna xanuunka, kansarka iyo macaanka ayaa lagu xoojin doona in iskuulada laga dhiso garoomo lagu cayaaro, goobo caafimaad oo laga hirgaliyo xarumaha shaqada, iyo in si weyn loo xakameeyo, canshuurana xitaa la saaro tobaakada, alcohol-ka iyo raashiinka dufanta iyo sonkorta ku badan tahay.
Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sidoo kale sheegeyso in ay tahay qasab in istiraatiijayadan sidoo kale lagu daro daryeelka dadka qaba xanuunka dhimirka ee sida weyn loo dacayay.
Waxyaabaha sababa cudurrada aan faafin ayaa kala duwan.
Balse guud ahaan waxa ay yihiin xanuunada ugu badan dunida ee ay dadku u dhintaan, 41 milyan oo qof ayaana sanad walba u geeriyoota.
15 milyan oo qof oo ka mid ah dadkaasi ayaana waxa ay u dhaxeeyaan da'da 30-ka sano ilaa 70-ka sano.